नेपालमा जकडिएको जातीय बिभेद, रुकुम पश्चिमको त्यो बिभत्स घटना « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » नेपालमा जकडिएको जातीय बिभेद, रुकुम पश्चिमको त्यो बिभत्स घटना
नेपालमा जकडिएको जातीय बिभेद, रुकुम पश्चिमको त्यो बिभत्स घटना
Punya PD. Dhamala नेपाल ट्युबका नेपाल सम्पादक तथा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता धमला समसामयिक बिषयमा कलम चलाउँछन् । Published On : 28 May, 2020
पुण्यप्रसाद धमला । काठमाडौं\_रुकुम । कोरोनाको कहर चलिरहदा २०७७ जेठ १० गते शनिबार रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोती गाउँमा एउटा बिभत्स घटना घट्यो । जाजरकोटका चार जना युवाहरुको भेरी नदिमा शब भेटिएको र दुई जना अझै बेपत्ता रहेको यो घटनाले यतिबेला सडकदेखी सदन तातेको छ ।
धेरैलाई चकित पार्ने र रुवाउने गरि भएको घटना आखिर के थियो ?
जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ का नवराज बिक आफ्नो अन्तरजातीय प्रमेलाई बिबाहमा परिणत गर्न भन्दै जेठ १० गते साँझ पाँच बजे आफ्ना १९ जना साथीहरु सहित रुकुम पश्चिम सोतीस्थित पे्रमिका सुष्मा मल्लको घर पुग्छन् । केही टाढाबाटै नवराजलाई देखेकी सुष्माकी आमाले जातिय आधारमा गाली गलौच गरेपछि नवराज सहित युवाहरुको समुह फर्किन्छन । केही मिटरमात्रै फर्कन नपाउँदै स्थानीयले घेराबन्दीमा परेका उनीहरु मध्ये केहीले निर्घात कुटपिटको सामना गर्नुपर्छ भने केही साथीहरु भागेर ज्यान बचाउन सफल हुन्छन् । यसरी अन्तरजातिय प्रेमलाई बिबाहमा परिणत गराउन पुगेका युवाहरुमाथी कुटपीट र हत्या भएको भनिएको घटनामा स्थानीय वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल समेत संलग्न भएको आरोप लागिरहँदा भेरी नदिबाट चार जनाको शब निकालिएको छ भने अझै दुई युवाहरु बेपत्ता छन् ।
अहिले नवराजको घरमा मात्रै होइन्, उनको अन्तरजातीय प्रेमलाई बिबाहमा परिणत गराउन भन्दै गएर ज्यान गुमाएका परिवारमा रुवाबासी चलेको छ । नवराजका आमा, बुबा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन, उनीहरु आफ्नो छोरा र साथीहरुलाई कुटीकुटी मारेको भनिरहेका छन् ।
नवराजसँगै गएका साथीहरु भन्दै छन्–हामीले भागेर ज्यान जोगायौं । घरेलु हतियारसहित आएका स्थानीयहरुले घेरा हालेर निर्घात कुटपिट गर्दा साथीहरुको ज्यान गयो । एक जना बाटैबाट फर्किएर जोगिए भने बाँकी १२ जनाले भागेरै ज्यान जोगाएको दाबी गरिरहेका छन् ।
भेरी नदीमा बेपत्ता भएकामध्ये नवराजको आइतबार बिहान शव फेला प¥यो । उनीसँगै गएका साथी चौरजहारीका टिकाराम सुनारको पनि सोही दिन दिउँसो शब भेटियो । सोमबार राती अर्का एक साथीको शब भेटिएकोमा बुधबार दिउँसो थप एउटा शब भेटिएको छ । हराएका दुई जनाको खोजी यतिबेला पनि जारी छ । भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्तीले समेत घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले अहिलेसम्म चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्षसहित १६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यो घटनाले नेपालमा जातीय छुवाछुतविरुद्ध कानुन भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन र बिभेद कायमै छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
यी तथ्य र आधारले भन्छ, युवाहरुको हत्या भएको हुनुपर्छ
तथ्य नम्बर एक : जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ का नवराज बिक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी ८ सोतीकी सुस्मा मल्लबीच लामो समयदेखी अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्ध
तथ्य नम्बर दुई : केटी केटाको घरमा आउने जाने गरेपनि केटीको घरमा जाँदा यसअघि नै केटाले कुटपीट सहनुपरेको घटना ।
तथ्य नम्बर तीन : भागेर बाँचेको दाबी गर्ने साथीहरुले गाउँ नै उर्लिएर निर्घात कुटपिट गरेको भन्दै दिएको बयान ।
तथ्य नम्बर चार : घटनास्थल नजिककाले नै गाउँलेले लखेटेको भन्दै गरेको स्विकार ।
तथ्य नम्बर पाँच : ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट लखेटेको र कुटेको देखेर त्यसो नगर्न भन्दै सम्झाएको स्विकारोक्ति ।
तथ्य नम्बर ६ : जातिय प्रेम र बिबाह प्रयासकै कारण लखेटी लखेटी कुटिएको मानव अधिकारकर्मीको फिल्ड अध्ययन ।
तथ्य नम्बर ७ : बुधबार टाउकामा गम्भिर चोट लागेको र डोरीले बाँधेको अवस्थामा शब भेटिनु ।
भागी बिबाहका लागि भन्दै घटना घट्ने समयासँगै पुगेर बाँचेका युवाहरुको बयान मात्रै होइन्, मानवअधिकारकर्मी, स्थानीय प्रहरी र शबमा देखिएका सबुतहरुले घटना गम्भिर अपराधीक प्रकृतिको थियो भन्ने उजागर गरेका छन् । कानुनले बर्जित गरेको जातभातलाई उठाएर यो हदसम्मको गम्भिर अपराध गर्ने र गराउने जो कोही भएपनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्दै यतिबेला पीडितले राज्यसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।